Abathandi bebhola bazoyithokozela imititilizo yokuvotela ama-PSL Awards | News24
Abathandi bebhola bazoyithokozela imititilizo yokuvotela ama-PSL Awards
Durban - Kungokokuqala ngqa ukuthi i-Absa Premiership, ivulele umphakathi amathuba okuvotela umdlali oshaye igoli elidle umhlanganiso kule sizini.
Amathuba okuvota esevuliwe kanti abathandi bebhola likanobhutshuzwayo bangangena ku-www.PSL.co.za kungakashayi umhlaka-5 ku-Julayi ukuze bavotele igoli elibahlabe umxhwele.
Isizini ka-2016/17 kube yisizini emnandi kakhulu abadlali bebhola bebebukisa ngamagoli amahle abebewashaya kodwa lilodwa igoli ebelihamba lodwa nelizodla umhlanganiso.
Uyayikhumbula into eyenziwa ngunozinti weBaroka FC u-Oscarine Masukule enza ezibukwayo imizuzu isiphelile? Uthini ngamagoli amabili ashaywa wuSimpiwe Tshabalala? Ungabi nomona wenze sengathi awuyikhumbuli into eyenziwa wuMxolisi Kunene ezinyangeni ezimbalwa ezedlule.
Lawa kanye namanye amagoli amane yiwona akhethwa njengamagoli ahambe phambili kulezi zinyanga ezedlule.
Abathandi bebhola bazozikhethela abakuthandayo bashiye abangakuthandi kodwa uyedwa umanqoba ofunekayo ngoba iyodwa indondo ekumele ithathwe.
OLUNYE UDABA:Asemenyezelwe amagama abadlali abaphakanyiselwe ama-PSL Awards
Imititilizo yabalandeli abazovota:
U-Absa, ungomunye wabaxhasi abahamba phambili ku-Absa Premiership, futhi uyena ohola lo mncintiswano.
Leli bhange ligqugquzela abathandi bebhola ukuthi bavote kakhulu bazibeke ethubeni lokuthola amathikithi ezicukuthwane emcimbini wezindondo ze-PSL ozoba ngomhlaka-10 Julayi eSandton Convention Centre, eGoli.
Umlandeli ozowina uzothola nethuba lokunikezela ngale ndondo kumdlali okhethwe nguyena.
Naba abadlali ongakhetha kubona:
· Agasti/Septhemba: Marc van Heerden (Chippa United) v Baroka FC
· Okthoba: George Lebese (Kaizer Chiefs) v Ajax Cape Town
· Novemba: Oscarine Masuluke (Baroka FC) v Orlando Pirates
· Disemba: Percy Tau (Mamelodi Sundowns) v Free State Stars
· Febhuwari: Siphiwe Tshabalala (Kaizer Chiefs) v Free State Stars
· Mashi: Mxolisi Kunene (Baroka FC) v Kaizer Chiefs
· Ephreli: Siphiwe Tshabalala (Kaizer Chiefs) v SuperSport United
· Meyi: Lerato Lamola (Golden Arrows) v Orlando Pirates
Indlela yokufaka ivoti lakho:
1. Ngena ku-www.PSL.co.za ubheke phezulu ngakwesokudla lapho kuvezwe khona igoli lesizini
2. Ngena kulelo khasi ugcwalise lelo fomu (kudingeka igama nesibongo)
3. Faka ivoti lakho
4. Ngokwenza njalo uzobe uzibeke ethubeni lokuthola amathikithi e-VIP Experience emcimbini wama-PSL Awards.